Awoodda Shabaabku ma sii jiri doontaa | Shabakada Alshahid
Added by Siciid Cali Axmed on February 23, 2010.
Saved under qoraa sare, Saciid Cali Xasan
Maqaal hore oo aan ku magacaabay “Shabaab yaa horta koriyay” ayaan ku soo bandhigay sababaha uga waaweyn ee ururka Al-shabaab siiyay awooda uu maanta leeyahay. Culimada diinta oo doorkii laga filayay gudan waayay, ururadii Islaamiyiinta Soomaalida ee la yaqanay oo ay saamayntoodii yaraatay iyo taageerada fikradeed iyo khibradeed ee ururkani uu ka helay ururada ay fikirka wadaagaan ee ka jira caalamka Islaamka ayaa ugu waaweyn sababaha xoojiyay awooda ururkan. Inkasta oo uu ururkani maanta yahay quwad aan la inkiri karin hadana su’aasha mudan in la is waydiiyaa waxa weeye quwada ururkani ma sii jiri doontaa waqti dheer mise waxa ay u burburi doontaa sidii ay u burburtay awoodii ay lahaayeen ururo badan oo ururkan uga soo horeeyay masraxa siyaasada Soomaalida? Qaybka Ilaahay uun baa og laakiin waxa aan ku doodaynaa in dariiqa uu ururkani ku socdaa aanu ahayn dariiq caawinaya in ururkani uu sii jiro mudo dheer. Doodana waxa aan u cuskanaynaa arimahan soo socda:
Fikrado Xag Jirta
Mabaadiida ururkani waa mabaadii xag jirta oo aan ka duulayn mabaadiida dhexdhexaaadka ah ee diinta Islaamka. Xag jirnimo ka wayni ma jirto fikrada odhanaysa “ama aniga I soo raac ama MURTAD(qof diinta ka baxay) baad tahay”. Fikradaha ururkani waxa ay mujtamaca u qaybiyeen “Mujaahidiin” mudan in la taageero iyo “Murtad” uu dhiigiisu banaan yahay. Aragtida Shabaabka ee ah in aanay jirin cid aan iyaga ahayn (cuilmo iyo caamaba)oo mudan in ay qabtaan hogaanka Soomaalidu, iyana waa aragti kale oo xag jirta. Maamulada Soomaalida iyo Muslimiinta oo dhami-agtooda- waa maamulo ay gaalo ku shaqaysanayso oo mudan in la burburiyo. Isqarxinta, diidmada wadahadalka, waynaynta arimo yar yar iyo yaraynta arimo waaweeyn, dhamaan waa fikrado ka fog fikradaha dhexdhexaadka ah ee ay diinta Islaamku ku yaboohayso. Way adagtahay in urur ay sidaas fikradihihiisu u xag jiraan uu sii jiri karo waqti dheer.
Caalamka oo dhami waa u cadow
Nin ka tirsan Shabaabka oo maalin dhawayd ay idaacad kuwa Afsoomaaliga ku hadashaa warysanaysay ayaa waxa uu ku hanjabayay in shabaabku ay aduunka oo dhan hujuum ku yihiin. Itoobiya, Keneya, Eretariya, Ugaandha, Amerika iyo Yurub intaba waxa uu lahaa “Qaadimuun” yacnii waan idinku soo soconaa. In caalamka oo dhan aad u aragto cadaw mudan in la hujuumo waxa ay sabab u noqonaysaa in uu caalamkuna adiga kuu arko cadaw mudan in la baabiiyo. Aduun la dagaalanku waa fikrad aan sax ahayn oo ka turjumaysa wacyiga hoose ee uu ururkani u leeyahay quwadaha caalamka ka jira iyo qaabka ay u dagaalamayaan. Mudo laba sano ku dhaw ayay Shabaabku askar aan badnayn oo Ugaandhiisa Muqdisho ka saari kari waayeen, ee su’aashu waxa ay tahay xagee ayay ka keenayaan quwadan ay caalamka oo dhan (Muslim iyo gaalba) ugu goodinayaan. Siyaasadaha noocan ah ee Shabaabka ayaa ugu danabaynta sabab u noqon doonta in si xeeladaysan la isaga kaashado sidii loo burburin lahaa ururkan. Soomaaliya aduunka maanta waxa looga arkaa meel ay ku gabanayaan dad khatar ku ah caalamka oo dhan. Waqtigii ay aduunka iyo Shabaabku ay si dhab ah isugu dhacaana waa ay adkaan doontaa in ay dhaliinyaradani ka badbaadaan burbur.
Urur aan Dan Soomaaliyeed wadin
In lala safto ururo uu caalamka oo dhami la dagaalansan yahay, in indhaha caalamka Soomaalida lagu soo jeediyo, in la diido nidaam dawladnimo, arimahaas oo dhami ma aha arimo ay danta Soomaaliyeed ku jirto. Waana Sababtan sababata ay dad badan oo Soomaaliyi maanta uga soo horjeedsadeen urukan. Burburka Shabaabku kama imin doono dagaal kaga yimaada quwado aan Soomaali ahayn ee waxa uu ka iman doonaa kacdoon ka bilaabma gudaha dhulka ay xukumaan iyo diidmada shacabka ay ku dhex nool yihiin ee ay maanta maamulaan. Dad aan raali kaa ahayn in aad maamusho oo aad waqti dheer hor joogtaa way adagtahay, waaqicuna waxa uu sheegayaa in Shabaabku aanay waqtigan taageerayaal badan ku lahayn Soomaalida dhexdooda.
Taariikhdu waa markhaati
Laga soo bilaabo waqtigii Sayid Cusmaan ilaa iyo waqtigan aynu joogno marar badan ayaa waxaa caalamka Islaamka ka soo baxay ururo aan fikirkooda siyaasadeed aanu aad uga fogayn fikirka siyaasadeed ee Shabaabka. Way dhacday in qaar ka mid ah ururadaasi ay waqti ahaayeen quwad jirta laakiin quwadoodu ma ahayn mid waqti dheer sii jirta. Kuwii ugu danbeeyay ururadaas waxa ka mida Al-qaacidii ka dagaal galaysay wadanka Ciraaq, Jihaadiyiintii Aljeeriya iyo Jihaadiyiintii Masar. Dhamaantood maanta waa uun magac aan awood lahayn. Mustaqbalka Shabaabkuna kuwaas ma dhaamayo waa hadii aanay fikradahooda iyo siyaasadahooda wax wayn ka badalin.
5 Responses to Awoodda Shabaabku ma sii jiri doontaa
Abu salaxaaudiin February 24, 2010 at 5:40 am
Waxaa Mahadleh Ilaahay, waxaanna ah in lagu xamdiyo Nicadiisa, markay dhmaato nimcadaan ayaan garanaaa.
Waxaad ogtihiin in aan soomaali Dowlad Dhisanaynin iyadu, oo ay kala dileen, Dad dalalkale ushaqeeya oo lasoo adeegsado(sooseexis ah).
Waxaad Ogsoontihiin In Islaamka melkasta lagula dagaalamayo, oo in lala dagaalaa caalmkii kale isku waa faqsan yahay.
Waxaad ogsoontihiin in Wadankeena lagu wareejiyey Itoobiya iyo keenya.
Waxaad ogsoon tihiin in labii sidii lagu badbaadinlahaa qaabaa’iilo naloo qeybiyey.
waxaad ogsoonntihiin Muqdisho Gabre inuu xukumay 2labo sano, hantidiina uu qaatay qarna uu burburiyey.
waxaad ogsoon tihiin in wiilashaas dameerka islaamku kiciyey ee u istaagay inay Bunbo yar cadowga soomaalida iyo kan ilaahay ku tuuray inaad maalin kasta haysataan oo ilaahay ku guulaysiiyey inay kasaaraan itoobiya gaalada ah iyo C/laahigii sooseexiska ahaa dadkii uu watay.
markii ay mu aamaradii gaaladu ay fashiilantay, markii sigii lagula balamay uu fashilmay markii cadaabkii ilaahay kasokow wiilash yaryari ee aad leedihiin waxaa nacay aduunka ay dhiigooda qaaliga ku furteen soomaaliya ayaad maantay waxaad leedihiin masiijirayaan.
ninkursi raadinayey oo uu gaal lasoo balamay, oo kursigii waayey ayaa wuxuu oranayaa Alshabaab waa xagjir alshabaab waxaa nacay aduunka alshabaab wax dan ah uma hayaan soomaali alshabaab waa…..
Anigu alshabaab ma’ahi kamana tirsani, laakiin nin damiir islaam ah iyo soomaalinimo ay qaaday baan ahay
Alshabaab Waa wiilasheenii waanna u baahanay mana burburayaan insha alaahu
miyaadan arag sida caruurta muslimiinta Afgaan loogalayo ee abriyaaga ah , miyaadan arag Amisom Madfac ay maalinkasta ladhacayso caruurta muqdisho, oo ay wakiilka katahay Itoobiya iyo maraykan iyo misiixiyad oo dhan.
muraad March 16, 2010 at 12:21 pm
waxaan salaamayaa dhamaan akhyaarta sharafta leh ee uu wali kujiro damiir islaanimo iyo mid bini aadanimo
intas kadib waxaan layaabanahay qoraaga maqaalkaan soo mad-madoobeeyay waxa uu ka hadlayo iyo sida ay xaqiiqda uga fogtahay..
sidoo kale waxaan layaabay sida uu uga jaahilsanyahay waaqica caalmak isalamiga ka jira oo uu been cad uga sheegay awooda mujaahiidinta caalamka iyo qeybta ay kaga jiraan ladagalanka dagaalka saliibiyiinta caalamiga ah ee uu USA horkacayo..
walaal waxaad ku sheegtay qoraalkaaga alshabaab inay leyihiin imaa anaga nasoo raaca mise MURTAD BAAD TIHIIN..meeshay ku dhaheen waa lagaa rabaa..ileen anaga ma nihin dad caamo ah oo wax walba o lasoo mad-madoobeeyo u arka xaq ama waxyi aan aqbalayn radin!!!
Wiilshaan haday boogta farta kufiiqeen ma waxaad leedihiin waa khaldanyihiin oo ma ahayn in hada boogta la tilmaamo ee aan iska ahaano bukaan socod!! walaal BAROORTU ORKIGA KAWEYN!! waxa idinka qaylisiinaya oo aad af-labadiis uyeerteen wax kale ma aha ee aan ka ahayn in wiilashaan aad necebtihiin ay caalamka kala saareen xaqiiqdiina iftiimiyeen oo ah cadowtinimada ay gaalada uqabaan ISLAAMKA IYO MUSLIMIINTA meeshana kasaareen beentii aheyd DIMUQRADIYAH oo waxa aad lacabaadaysaan adiga iyo kuwa kula fikirka ah waa in ay dhamaatay kuraxaysigii YURUB iyo wadamada CARABTA oo qofkii xaqa ka hadlaaba la ogyahay maanta inuu MADLUUB YAHAY oo laxirayo xoriyadana laga qaadayo!!!
Alaah aan ka cabsano oo aan xaqa taageerno anagoo fiirinayn cida wada xaqa ee aan fiirino waxa lawada XAQ MAYAHAY!!!
Maaad ka hadasho HADALKII BUSH (LACNATU ALAAHI CALAYHI) oo aha IMAA MACANAA WA IMAA DIDANAA (inaad nala soo safatan ama inaad naga safataan)!!
kaas kahadal oo wakhti ku bixi..
MISE MAALMAHAAN waxaa lagu helaa sharaf iyo darajo dhanka gaalada inaad ka hadasho ALSHABAAB iyo Mujaahidinta si aan laguugu shaabadeyn inad tahay TERRORIST!!! walaal sidaas la iskagama harayo ee an dhareerka iska duwno
ishwaq March 18, 2010 at 8:19 am
ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR ILLAHAYOW WILASHAAS DHIGOODA U HUREY INAY KALIMADDAADA KOR NOQOTO GUULEE BI’IDNILLAAH
MIDKASTO OO SAFIIH AH OO DOQON AH AFKIISA WAXAA LAGA YEEERIYEY ALSHABAABEY ALSHABAABEY ILLAHAY IDIIN DIL CARADA AAD UQABTAAN WIILASHAAS DULIYOHOW XOOLAHA AH
Sama wade April 21, 2012 at 7:09 pm
wax kale ma qorayo oo aan aheyn in aan mahadcelin balaaran usoo jeediyo qofka wata magacan ee faalada koobaad dhiibtay “muraad”
walaal aad ayan kugu mahadcelinayaa sida wacan ee aad xaqa u cadeysan waana sidaad sheegtay o manta waxaa lagu fanayaa waa raali galinta gaalada waxaana hubaal ah in qofka waxa uu qabanwaayo qofka qabtaa uu cawad u noqdo…
maxamuud al-ansaari December 18, 2012 at 8:05 pm
marka hore salaan iyo sida fiican ee loosoo bandhigay faaqidaadan fiican inta kadib waxaan in yar jeclaan laha inaan wax yar ku darsado . somaliya runtii uma baahna hada wax la yidhaahdo alshabaab iyo wixii aaminsan fikradooda oo dhan wax jihaad la yidhaana wadanka kama jiro ee dumar iyo maati iyay laynayaan nimankaasi islaamkana way ka fogyahay falkoogaasi sidaa darteed waxaa dhihi lahaa walaalayaal nagabaxa oo waxaad aadaan meelo kale oo jihaad ka jirro hadii aad jeceshihiin uun inaad wax laysaan , fikir ahaana maaha somalia ee samays shisheeye imika iyo haatan alhamdulilaah ummado way nacday dibna uma soo noqonayaan insha alho …… mahadsanid